सेमिनारमा बैंकिङ बुथ पनि राखिनेछ : अध्यक्ष तिगेला - Purbeli News
सेमिनारमा बैंकिङ बुथ पनि राखिनेछ : अध्यक्ष तिगेला
प्रकाशित मिति: बिहिबार, पौष १९, २०७५ समय: १७:४१:०१
इडन एकेडेमी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. धरानले यही पुष २१ गते शनिबार र पुष २२ गते आईतबार फ्रि सेमिनार गर्न गईरहेको छ । यो फ्री सेमिनार अष्ट्रेलियामा पढन जान चाहाने विद्यार्थीहरुका लागि केन्द्रित रहेको बताईएको छ । यहीक्रममा रुबी हुक्पाचोङ्बाङले इडन एकेडेमी कन्सल्टेन्सी प्रा.ली. धरानका अध्यक्ष मोहन तिगेला संग फ्रि सेमिनारको बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको संक्षिप्त कुराकानी ।
यो सेमिनार अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठीत कलेज र विश्व विद्यालयहरुको प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने भएकोले यो अष्ट्रेलिया पढन जान चाहाने विद्यार्थीहरुको लागि सुर्वण अवसर हो । यो सेमिनार धरानमा यही पुस २१ गते शनिवार र इटहरीमा पुस २२ गते आईतवार हुदैछ । धरान र इटहरीका विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियामा पढन जादा चाहिने अत्याआवश्यक जानकारी र उनीहरुले भविष्यमा प्राप्त गर्न सक्ने अवसरहरुका बारेमा भरपुर जानकारी पाउनेछन् । यसैगरी यसपटक विद्यार्थीहरुको सहुलियतका लागि बैकिंङ बुथ पनि राखिने छ । जहा विद्यार्थीहरुले झेल्नुपर्ने अर्थिक समस्या र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सम्पुर्ण जानकारी विद्यार्थीहरुले पाउनेछन् ।
पहिलेको सेमिनार र अहिले के फरक छ ?
पहिले भन्दा फरक विश्व विद्यालय र कलेजहरुको उपस्थिति रहनेछ । हामीले धेरै भन्दा धेरै र फरक विषय वस्तुहरु समावेश गर्देछौ । जस्तै ः नर्सिङ, होटल म्यानेजम्यण्ट, इन्जिनियरिङ लगायत जति पनि हाम्रो विद्यार्थीहरुको विषयवस्तुको रोजाई अन्र्तगत पर्ने धेरै विषयहरु भएका विश्वविद्यालय र कलेजहरुको प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति छ ।
यो सेमिनारले कस्ता विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेको छ ?
यो सेमिनारले प्लस टु पढि सकेका विद्यार्थीहरु व्याचलर्स पढन र व्याचलर्स पढीसकेकालाई मासर्टस पढन र मासर्टस पढीसकेकालाई रिसर्च अर्थात विद्यावारीधि गर्नेहरुलाई लक्षित गरेको छ । समग्रमा हामीसंग प्लस टु देखि पिएचडी सम्म पढने विषय वस्तु भएका कलेज र विश्व विद्यालयहरुको सहभागिता हुनेछ । यस कारण धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरु लाभान्वीत हुनेछन् ।
स्पोट एडमिसनको व्यावस्था छ की छैन ? यस पालिको सेमिनारमा ?
केही विश्व विद्यालय र कलेजहरुले विद्यार्थीहरुको कागजात हेरेर स्पोट एडमिसनका लागि स्पोट अफर लेटर दिने व्यावस्था छ ।
पहिलो पटक धरान र इटहरीमा गर्न लागिएको हो भने अव चाडैनै विराटनगर र विर्तामोडमा पनि गर्ने योजना रहेको छ ।
ईन्टरनेसनल ईडन एकेडेमी कन्सल्टेन्सी इटहरीले सेमिनार गर्ने